Madaxweynaha Puntland oo safarkiisii ugu horeeyay ku tagay Gaalkacyo tan iyo markii uu xafiiska qabtay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo safarkiisii ugu horeeyay ku tagay Gaalkacyo tan iyo markii uu xafiiska qabtay
May 19, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne Deni oo xariga ka jaraya xarunta madaxtooyada Puntland ee Gaalkacyo. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Axad ah safar ku tagay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Madaxweynaha iyo wefdigiisa ayaa duleedka magaalada ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka socotay maamulka gobolka Mudug, iyo kan degmada Gaalkacyo, nabadoono, iyo qeybaha kale ee bulshada.
“Runtii waan ku faraxsanahay inaan Gaalkacyo soo gaaro, waan uga mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhoweyntayada, waxaan rajaynayaa mudada aan halkan joogno inaan kulamo qaadandoono, waxaanna iska waraysandoonnaa dalka horumarkiisa iyo mustaqbalkiisa.” Ayuu yiri madaxweynaha oo hadal kooban jeediyay markii uu gaaray halkaas.
Madaxweyne Deni ayaa xariga ka jaray xarunta cusub ee madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo, isaga oo ku aamanay madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali hirgalinta xaruntaas.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan xarigga ka jarno qasriga Madaxtooyada Gaalkacayo, waxaan marka hore uga mahadcelinayaa Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo runtii aasaaskeedii iyo hirgelinteedii lahaa.” Ayuu yiri.
Waa markii ugu horeysay oo Deni uu safar ku tago magaalada Gaalkacyo tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii Janaayo ee sanadkan.
Markab dagaal oo Shiinuhu leeyahay iyo diyaarad ay leeyihiin ciidamada badda Hindiya oo horjoogsaday weerar ay koox looga shaki qabo burcadbadeeda Soomaalida la beegsadeen markab ganacsi
Garoowe-(Puntland Mirror) Markab dagaal oo Shiinuhu leeyahay oo taageero ka helaya diyaarada qumaatiga u kacda oo ay leeyihiin ciidamada badda Hindiya ayaa horjoogsaday weerar ay koox looga shaki qabo burcadbadeeda Soomaalida la beegsadeen markab ganacsi, [...]
Puntland oo beenisay in Dowladda Federaalka Soomaaliya lacag ugu deeqday wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa beenisay in aysan jirin lacag ay si rasmi ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ugu deeqday dhismaha wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay Puntland. “Dawladda Puntland waxay la wadaagaysaa ummadda [...]